Rail Safety in Somali – Minnesota Operation Lifesaver
Wakhti kasta filo tareenka.
Si xaqiiqa ah uma ogaan kartid wkhtiga uu tareenka mari doono isgoysyada, xataa haddii isgoysku uu yahay mid aad maalin kasta ku martid lug ama gaari. Tareenada xamuulku jadwal caadi ah kuma socdaan, sidoo kalena jadwalka tareenada qaada dadka waxa uu isbadali karaa wakhti kasta. Markasta digtooni qab, sababta oo ah tareenku waxaa uu meesha soo mari karaa wakhti kasta maalin ama habeen jid kasta asaga oo u socda jahadii la doono.
Ha ku sirmin-tareenku wuu ka dhowyahay waana ka dheereeyaa inta ay kula tahay!
Sida ay diyaaraddu ugu muuqato in ay tartiib u socoto, ayaa indhahaagu ku siri karaan marka tareen soo socdo-waxa uu tareenku indhaha ula muuqan karaa mid kaa fog oo si tartiib ah oo ka yar inta dhabta ah uu kuu jiro ama xawaaraha dhabta ah uu ku socdo. Ha is galin khatar-way fududahay in lagu khaldamo tareenka xawaarihiisa iyo inta uu kuu jiro gaar ahaan habeenkii.
Tareenadu si dhakhso ah uma joogsan karaan umana leexan karaan.
Markii bareegga si buuxda loo qabto, tareen xamuul ee buuxa kuna socda xawaare dhan 55 mayl saacaddii, waxay ku qaadan kartaa hal mayl ama ka badan si uu u joogsado. Tareen fudud waxa uu u baahan yahay 600 fiit si uu u joogsado, Tareenka ka koobma 8-gaari kuna socda 80 mayl saacaddii waxa ku qaadataa hal mayl in uu joogsado. Xataa haddii uu ku arki karo injineerku ma haysto wakhti ku filan in uu kaa joogsado.
Joogso oo sug haddii ay albaabadu xiranyihiin ama nalaku big-big leeyihiin.
Haddii ay albaabada xiran yihiin ( birtu hoos u dhacsantahay joogso oo sug-taasi waa sharci. Soco marka ay albaabadu furmaan nalka gaduudana ay joojiyaan big-bigta).
Iska hubi jidadka oo dhan inta aadan goynin.
Haddii aad goynaysid isgoys ka kooban hal jid, aad ooga taxaddar marka uu tareen ku dhaafo. Inta aanad goynin, hubi tareen kale in aanu ku soo jirin wado kale ama jaho kale-kan kowaad waxa uu kaa qarrin karaa kan labaad.
Ha ku Xannibmin wadada Tareenka.
Marna ha ku wadin gaariga wadada tareenka in aad hubtid mooyee in aad dhanka kale u gaari katid adiga oo aan istaagin. Haddii gaarigu kaa fariisto jidka dhexdiisa , isla markiiba ka saar dadaka saaran oo dhan xataa haddii aadan arkin tareen soo socda. Dhakhso ooga bax jidka tareenka. Haddii tareen soo socdo, u soco dhanka uu u scodo marka aad ka baxdid jidka. Haddii aad u carartid dhanka uu u socdo, waxaad ku dhaawicmi kartaa firirka ka yimaada marka uu tareenku ku dhaco gaariga. Markii aad gaartid meel amaan ah kana durugsan isgoyska wac 9-1-1 ama lambarka xaaladaha deg-degga ah ee ku dhagsan isgoyska.
Ha ku Meeraysan Dhulka tareenada adiga oo (xitaa) lug ah.
Jidadka tareenada iyo dhulka iyo dhismaha ku dhinac yaala waa hanti gaar ah-ayaga ayaan mudnaanta kowaad u leh jidka. Ka joog tareenada iyo jidadkooda. Ha ku xad-gudbin-waa sharci darro dhimashana way keentaa marar badan.
Isgoysyada haywayada iyo jidadka tareenka waxa ay la mid yihiin isgoysyada caadiga ah, sida meelaha ay wadooyinu iska gooyaan. Isgoysyada qaar waxa ay leeyihiin calaamado u sheega in ay wadadu ay goyn doontu jid tareen. Isgoysyada jidadka tareenka ee aan lahayn nalalka waxaa loo yaqaan isgoysyo “aan shidmin” waayo malaha qalab daarmaya marka uu tareenku soo dhawyahay. Isgoysyada qaar ayaa waxay leeyihiin nalal big-big yiraahda, jaras (ama beel), ama qalab kale ee digniin ah marka uu tareen soo dhowyahay. Kuwaas waxaa loo yaqaan isgoysyada “shidma” sababta waxa ay leeyhiin qalab daarmaya marka uu tareenku soo dhawyahay si dhab ahna ugu diga darawlada iyo dadka lugta ah.
Calaamdda isku tallaabta ah ayaa looga baahnayahay isgoysyada oo dhan. Waxaa ay leeedahay labo sabuuradood ee cad-cad oo ay ku yaalan kalmadaha RAILROAD CROSSING (loolana jeedo isgoys tareen). Waana in loo tix galiyaa sida calaamadda YIELD (mudnaan sii kan kale). Waa in aad tareenka siisaa mudnaanta.
Fiiri hoosta calaamadda isku tallaabta ah si aad u aragtid haddii ay jiraan calaamado kale ay sheegaya inta jid ee marta meesha. Haddii uu yahay hal jid ka badan, calaamaddaas ayaa ku ooli doonta. Marka uu hal tareen ku dhaafo, eeg oo dhagayso bal in wax tareeno ah ay ka soo socdaan dhanka kale.
Calaamadaha JOOGSIGA (STOP) iyo kuwa MUDNAAN SIINTA (YIELD) ee isgoysyadu waxa ay la micne yihiin kuwa kale ee isgoysyada caadiga ah ku yaal. Wadeyaashu waa in ay istaagaan meelaha JOOGSIGA ee ka horeeya jidadka tareenka, wade kastana waa in uu mudnaanta wadada siiyaa tareenka.
Calamadaha DO NOT STOP ON TRACKS (HA ISTAAGIN WADADA DHEXDEEDA) waxay xusuusiyaan wadeyaaashu in aanan sina u joogsan jidka dhexdiisa.
Calaamadaha MEESHAAN HA DHAAFIN (NO TRESPASSING) waxaa badanaa lagu dhajiyaa boondooyinka, tuneelada, waxyaabaha celiya boondada, mudnaaan lahaanshaha tareenada iyo goobaha tareenada. Meeshu ama ha la haato calaamadda “No Trespassing” ama yaanay lahaan, dadka ku socda jidadka tareenka iyo meelaha u dhow, boondooyinka ama tunneelada waa la xiri karaa waana la ganaaxi karaa. Xadgubidda meelahaas khatar ayay galin kartaa naftooda.
Calaamadaha shidma ee isgoysyada tareenada
Nalalka digniinta ee gaduudka ah, oo ay la socdaan jarasyo (beelka) iyo albaabo, ayaa loo adeegsadaa digniinta darawalada iyo dadka lugta ah marka uu tareen soo dhowyahay. Waa sharci darro in lala wareego albaabka. Sidoo kale qalabka digniinta oo la iska indho tiro oo lala wareego albaabka, waxa ay wadaha sharci ahaan dusha ka saaraysaa wixii geeri, dhaawac ama dhib kale ah ay ka yimaada shil uu sababay. Isgoysyada leh calaamadaha shidma: 1) Joogso ee sug albaabku inta uu kaa furmayo 2) Joogso nalalka digniinta hadii ay big-big leeyihiin soco oo kaliya haddii uuna tareen muuqan.
Marka aad u soo dhowaatid isgoyska tareenka, fiiri calaamadda isku tilaabta ah hoosteeda bal haddii ay jirto calaamad sheegaysa in uusan jidku mid kaliya ahayn. Haddii ay ka badan yihiin hal jid, ha isku dayin in aad durbadiiba goysid marka uu tareenku ku dhaafo. Sug oo hubi tareen kale in aanu ku soo jirin wado kale ama jaho kale-kan kowaad waxa uu kaa qarrin karaa kuwa kale.
Isgoysyada badan ayaa leh albaabo iyo nalal gaduudan iyo jaras (ama gambaleel) digniin ah. Marka ay nalaka digniintu big-big leeyihiin waa in aad joogsataa. Waxay big-bigtaas u dhigantahay tareen ayaa soo socda. Waa sharcidarro in aad la wareegtid isbaarada hoos loo dhigay. Marka isbaarada kor loo qaado nalalkuna joogiyaan big-bigta waad socon kartaa. Haddii ay nalaka digniintu big-big leeyihiin isgoyskuna uusan isbaaro lahayn waa in aad joogsataa. Sida kaliya oo aad ku gudbi karti waa marka uusan tareeenka muuqanin.
Haddii isgoysku uusan lahay isbaaro iyo nal, sug in kugu filan marka uu tareenku ku dhaafo si aad dhan walba ee wadada aad ugu aragtid si wanaagsan inta aadan bilaabin in aad goysid wadada.
Sidii aad samayn lahayd haddii aad ku xanibbanto jidka tareenka
Tareenadu si dhakhso ah uma joogsan karaan umana leexan karaan. Tareenka caadiga waxa uu le’egyahay 1 ilaa 1¼ mayl dhereer ahaan (90 ilaa 120 gaari-tareen ayuu ka koobmaa). Marka uu tareenku ku socdo xawaare dhan 55 mayl saacaddii, waxay ku qaadan kartaa hal mayl ama ka badan si uu u joogsado kadib marka uu bareega deg-degga ah qabto injineerka tareenka. Tareenka ka koobma 8-gaari kuna socda 80 mayl saacaddii waxay ku qaadataa hal mayl in uu joogsado. Sidee ayaan ugu bar-bar dhignaa baabuurta caadiga ah?
Baabuur ganacsi oo isjiid ah waxa uu ku joogsan karaa 300 fiit-taas oo le’eg hal garoonka kubadda cagta
Tareenka fudud waxa uu u baahan yahay 600 fiit si uu u joogsado- taas waxa ay le’eg tahay labo garoon ee kubadda cagta.
Jidadka tareenada waa hanti gaar ah. Meelaha u dhow wadada waxaa sidoo kale iska leh isla tareenadaas. Waxaa loo yaqaan “mudnaanta koowaad ee wadada” (right-of-way). Dadka aan u haysan ogolaansho in ay joogaan dhulka iyo dhismeyaasha jidadka tareenka waa meerestayaal (Trespassing). Hantida jidadka tareenada waxaa laga yaabaa in lagu dhajiyo calaamado kala duwan ee leh “Ha ku Meeraysan” (No Trespassing). Calaamaha oo dhan micnahoodu waa ‘ka joog meeshaan” iyo “ha soo gudbin.” Xataa haddii ayan wadan wax calaamad ah, waa sharci darro waana khatar in la galo dhul gaar ah.
Maxaa ka mid ah khaladaadka dadku ay galaan marka ay galaan si sharci darro ah dhul u gaar ah jidadka tareenada?
Waxa ay ku mashquulaan waxa ay samaynayaan sida – socod, kaluumaysi biriijka hoostiisa iwm – mana siiyaan taxaddar gaar ah wadada tareenka.
Wax yar-yar sida lacagta badanaa waa uu kala bixiyaa tareenku laakiin marar badan waxa si xoog badan oo geeri keeni kara u soo tuura lugaha tareenka. Waxa ay ku dhici kartaa qofkii dhigay ama dad kale ee meesha taagan.
Walxaha waaweyn waxa ay gadin-karaan tareenka, taas oo keeni karta dhawac iyo dhimasho
Khatar badan ayay keeni kartaa gaariyada tareenka oo korkoda ama hoostooda lagu ciyaaro. Way ruxmaan gaariyadaas marka ay dhaqaaqayaan waxayna u luxmaan si kadis ah. Markasta isticmaal meelaha loogu tala galay dadka lugta ah marka aad goynaysid jidka.
Ololaha Nolol-badbaadin waa hay’ad samo fal waxbarasho iyo wacyi galin ah ee ku fidsan goboladda oo dhan loogana danleeyahay in lagu dhameeyo shilalka, dhimashada ama dhaawaca ka dhaca isgoysyada jidadka tareenada iyo goobaha ay leeyihiin jidadka tareenada. Si uu u fuliyo howlihiisa barnaamijkan Ololaha Nolol-badbaadin waxaa uu adeegsadaa halkudhag ka kooban 3 E una taagan Waxbarashada (Education), Sahminta (Engineering) iyo Sharcifulinta (Enforcement). Ololaha Nolol-badbaadin waxa uu:
bara dadweynaha jidadka tareenada iyo nabadgalyada dadka lugeynaya.
ogolaadaa habka lagu hormarinayo nabadgalyada isgoysyada jidadka tareenada asaga oo adeegsanaya naqshadda iyo farsamada cusub.
Dhiiri galiyaa dhab u fulinta sharciyada lagu maamulo isgoysyada.
Maxay tareenadu mudnaanta horaynta ay ugu leeyihiin wadooyinka?
Tareenada si fudud oogama istaagi karaaan baabuurta ,maraya isgoysyada. Xataa haddii injineerka tareenku uu bareegyada xaaladda deg-degta ah qabto, tareenka ku socda 55 mayl saacaddii waxay ku qaadanaysaa hal mayl in uu ku istaago. Fatuuradda waxay ku qadanaysaa 200 oo fiit (tallabo) in ay ku istaagto. Fatuuradda ayaa istaagidda ooga fiican tareenka.
Maxay tareenadu aadka ugu dheeryihiin (fidsanyihiin)?
Mararka qaar waxaa laga yaabaa in uusan tareenku dhaqaaqi karin markaasna ay khasab noqoto in uu tareenku fadhiyo isgoyska muddo ka badan intii caadiga ahayd; tusaale ahaan, marka uu hawada cadaadiska ah dib ugu shubayo bareegyada hawada ku shaqeeya kadib markii si kadis ah (xaalad deg-deg ah) uu ku istaago.
Maxay tareenadu deg-deg ugu goyn waayeen isgoysyada? Xawaaare intee le’eg ayay ku socdaan?
Xawaaraha ay tareenadu ku socdaan waxaa dejisa dawladda Dhexe. Xawaaraha waxaa lagu saleeyaa sida ay tahay xaaladda wadadu iyo halka ay ku taallo.
Maxay tareenadu si tartiib ah ugu socon waayeen?
Markale, tareenadu waxaa u degsan xawaare sharci ah. Xawaaraha oo ay yareeyaan micnaheedu ma aha in ay khasbayso in shilalku yaraadaan- in ka badan kala bar ee shilalka isgoysyadu waxa ay dhacaan marka uu tareenku ku socdo xawaare la mid ah 30 mayl ama ka yar saacadiiba.
Maxaan samaynaa marka uu nalka joogsigu shidan yahay haseyeeshee wax tareen ah ayna muuqan?
Haddii uu isgoysku leeyahay qalabka iyo lambar teleefoon ee xaaladda deg-degga ah wac lambarkaas; Haddii kale wac 9-1-1 ama hay’adaha sharci fulinta ee deegaanka adiga oo sheegaya meesha uu isgoysku dhab-ahaan ku yaal.
Sannadkii 2010, 2 qof ayaa ku dhimatay 18 na way dhaawacantay 43 shil ee ka dhacay isgoysyada jidadka tareenka ee Minnesota.
Sannadkii 2010, wadanka Mareykanka 443 qof ayaa ku dhimatay ayagu oo si aan sharci ahayn u goynaya wadada tareenka waxaana ka mid ahaa 3 qof ee reer Minnesota ah. Waxaa dhaawacmay 390 qof ayaga oo wadada khalad u goynaya waxaana ka mid ahaa 6 qof ee reer Minnesota ah.
Baabuuuraydu waxa ay 20 jeer khatarta ay ku jiraan in ay shil tareen ku dhintaan ka badanyihiin midka ka imaan kara shil gaari kale.
Isku dhaca baabuurta iyo tareenku badankiisu waxa uu ka dhacaa 30 mayl in u jirta guriga darawalka.
Kala bar in ka badan shilalka isgoysyada waxa ay dhacaan tareenka oo ku socda 30 mayl ama ka yar saacaddii.
Darawalka waa in uu mudnaanta kowaad uu isgoysyada aan isbaarada lahayn siiyaa (tareenada).Tareenadu ayaa markasta iska leh mudnaanta kowaad (right-of-way).
Haddii nalalku ay big-big leeyihiin, joogso kadibna soco oo kaliya haddii tareen aanu muuqan.
Waa sharci darro in lala soo wareego dibedda isgoysyada.
Darawalka waa in uu joogsadaa isgoysyada tareenada oo dhan haddii tareen muuqdo. Sug oo ha dhaqaaqin ilaa uu tareenku gudbo.
Basaska dugsiyada iyo kuwa ganacsiga waxaa looga baahanyahay in ay joogsadaan isgoysyada tareenada oo dhan haddii ay sidaan rakaab iyo haddii kaleba. Inta uu taaganyahay wadaha waa in uu furaa dariishadihiisa iyo albaabka shaqada, kadibna dhagaysto, fiiriyana labada dhan ee wadada bal in wax tareen ah uu soo socdo.
Baabuurta sida walxaha khatarta ah waxaa looga baahanyahay in ay joogsadaan isgoysyada tareenada oo dhan. Laakiin darwalku waa in uu si wanaagsan ee aan kadis ahayn u istaagaa si uuna shil kale u sababin
Waa xad-gudub dhul (trespassing) waana sharci darro in la tago (ama lagu dul socdo) dhul ama waddo tareen ee gaar ah.
Laga soo Xigtay:
Maamulka Wadooyinka Qaranka